Iindaba -Ungazikhetha njani izinto ezifanelekileyo eziguqulwayo eziphilayo?
1. Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uthenga izinto eziguqukayo ze-organic plugging kwi-intanethi? Indlela yokwenza ukhetho olufanelekileyo?
Ukuthengwa kwe-Intanethi kwezinto eziguquguqukayo zokufaka izinto kuthetha ukuba imveliso ithengiwe kwiwebhusayithi yomzi mveliso. Ke ngoko, kukho izinto ezithile ezifanelekileyo eziqwalaselweyo okanye imiba efuna ukuthathelwa ingqalelo. Ngaphaya koko, ukuba inxulumene nokuthengwa kwemveliso, kubalulekile kwaye kuyathathelwa ingqalelo, ekufuneka kugxilwe kuyo. Ke ngoko, kufuneka uqwalasele izinto, ezinje ngemvelaphi yemveliso, iinkcukacha kunye neemodeli, ubungakanani, iiparameter, umgangatho wemveliso kunye nexabiso, kunye nomenzi.
Ukuba ufuna ukhetho olufanelekileyo, kufuneka wenze la manqaku mabini alandelayo: okokuqala, kufuneka wenze umsebenzi wokulungiselela ngaphambi kokuthenga iimveliso, ukuze ukwazi okwaziyo; Okwesibini, xa uthenga iimveliso, kuya kufuneka uthathele ingqalelo zonke izinto ezifanelekileyo, kwaye kuya kufuneka ujonge ngokubanzi, ukuze ube nokugweba ngokuchanekileyo. La manqaku mabini angentla anokufezekiswa.
2. Ngaba abavelisi bezinto eziguquguqukayo ze-plugging bafuna ukuqinisekiswa?
Abavelisi bezinto eziguquguqukayo zokufaka iplagi kufuneka benze umsebenzi othile wokuqinisekisa, kuba lo msebenzi unokuzisa izibonelelo ezithile, njengokuphucula ukhuphiswano lwabavelisi kunye neemveliso zabo kwimarike, kunye nokuphucula izibonelelo zoqoqosho zabenzi Ke ngoko, kuyafuneka ukuba uwuthathe nzulu lo msebenzi. Ukongeza, kukho izinto ezimbini ezichaphazelekayo kulawulo lomgangatho.
3. Zithini iimfuno ezizezinye nezisisiseko zezixhobo ze-organic plugging eziguqukayo?
I-Flexible organic plugging material, eneemfuno ezithile kunye nezisisiseko kwiimveliso, yile: ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kwezixhobo, iimodeli ezahlukeneyo kunye neenkcukacha, iindleko zenkqubo ephantsi, uluhlu olubanzi lwezixhobo eziza kwenziwa. Ngokwendlela yokusebenza, inokusetyenziswa ngokuqhubekekayo okanye ngamaxesha athile, kwaye iindleko zokusebenza ziphantsi kwaye ukusebenza kulula kwaye kufanelekile. Ukusetyenziswa, olu hlobo lwezixhobo zokufaka zinokusetyenziswa kumacandelo amaninzi. Kubavelisi bayo, umgangatho wemveliso unokuqinisekiswa kwaye imveliso inokwenziwa ngokokufuneka kwayo.